Kooxaha Fanka ee Heegan iyo Onkod oo shacabka kala qeyb galay dabaal degga maalinta labaad ee Ciidul Adxa “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxaha Fanka ee Heegan iyo Onkod oo shacabka kala qeyb galay dabaal degga maalinta labaad ee Ciidul Adxa “SAWIRRO”
Magaaladda Muqdisho, ayaa Maalintii labaad waxaa looga dabal dagayaa munaasabada Ciidul adxaa, waxaana wadooyinka iyo goobaha la isugu yimaado sida xeebta Liido lagu arkayaa dad weyne aad u fara badan oo dhamaashaadaya.
Kooxda Heegan ee Ciidanka Booliska iyo Kooxda Onkod ee Ciidanka Asluubta, ayaa ka qeyb qaatay dabaal degga maalintii labaad ee Ciidul Adxaa, waxaana bandhig faneed guubaabo ah ay ku qabteen Beerta Nabadda, Xeebta Liido iyo meelo kale oo ay isugu yimadeen kumaman shacab ah oo ka kala yimid degmooyinka Gobolka Banaadir.
Bandhig faneedka ay sameeyeen Kooxaha Fanka ee heegan iyo Onkod, ayaa waxaa kasoo qeyb galay Taliyaha Ciidanka Asluubta Sareeyo guud Bashiir Maxamed Jaamac “Keynaan”, Taliyaha Ciidanka Booliska Sareeyo Gaas Bashiir Cabdi Maxamed “Ameeriko” masuuliyiin ka socday maamulka Gobolka Banaadir iyo saraakiil kale.
Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed iyo Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo labaduba kormeeray goobaha ay isugu yimaadeen dadweynaha, ayaa sallaan la dhex qaaday shacabkii halkaasi ku sugnaa, iyaggoo la qeybsaday farxadda Munaasabadda Ciidul Adxaa.
Madaxa hoggaanka wacyi gelinta Taliska Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed Gaashaanle sare C/rashiid Cismaan Colod, ayaa sharaxay u jeedka barnaamijkaan, waxaana uu xusay inay ugu gol leeyihiin is dhex galka Ciidanka iyo Bulshadda.
Qaar kamid ah dadkii ku sugaa Beerta Nabadda iyo Xeebta liido oo la hadlay warbahiinta Qaranka, ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in ay la dabaldagaan Ciidamada Qaranka, taasina ay u ifneeyso hormarka dawladnimada.
Taliyaha cusub ee Ciidanka Ilaalada Badda oo xilka la wareegay
Rasul wasaaraha Australia Mr Turnbull oo ay Xubno ka tirsan xisbigiisa ka so horjeestay